1.what ndiyo chigadzirwa nani?
New nk CNC slitting otomatiki lathes (CNC kuedza) configuration yakawanda nokurondedzerwa pamusoro injini uye synchronous kutenderera richitungamirira ruoko design, anogona simba kutsigira zvinhu zvaishandiswa, kuvandudza processing Rigidity, inonzi machine zvakarurama uye kudzokorora zvakarurama; The muchina turusi iri vakapakata transverse uye musana magumo yemagetsi.
Kwakadaro muchina Ezvemutauro vanofanira zvinotevera huru zvinhu:
1. Zvine nedutu azvikuya kugona nekuti pfupa sikuruwa, sikuruu, honye, sikuruwa mhando zvikamu, zvinokosha kuti ironge mukuru-zvakarurama zononoka paburi, uye pose roughness pamusoro zononoka paburi zvinodiwa kusvika ra0.8mm.
Kudiwa muchina chokushandisa inofamba nzira, mukuru zvakarurama uye zvakanaka simba kugadzikana shinda SX325 CNC kuenda zvose kuburikidza lateral simba chikamu kuwedzera chamupupuri azvikuya mudziyo, transverse guru mudziyo kuburikidza cutterhead nemotokari zvakaoma chiwanikwa aricheke mukuru-nokukurumidza kutenderera (mukuru), muchina chishandiso chokurukisa nemotokari kwebhokisi kunonoka kutenderera (webetsero), Z1 mugodhi maererano workpiece nenamo kana kutungamirira nenzira workpiece akabatana sangano (inosimbisa sangano), chamupupuri azvikuya X1 inofamba (kutema kufamba) yakakwirira kunyatsoshanda machine mukuru nemazvo helical paburi.
2. High Rigidity motokari uye azvikuya rinoumba kubudiswa vanokwanisa:
Graph rimwe mafomu vari kukurukurirana, mhuri midziyo yemagetsi, zvemagetsi, matoyi nezvimwe maindasitiri makuru dhayamita nokurondedzerwa zvikamu uye zvinoriumba, kunzwisisa muitiro, mukuru zvakarurama, zvinoda kunzwisisa machine motokari, azvikuya uye kuchinja, SX325 cNC kuenda motokari zvose simba, azvikuya, unogona kugadzira kusvika aenzana. Traditional kugadzira nzira ndeyokushandisa kusanganiswa kudzora lathe kana azvikuya muchina, Drilling muchina, machine centre muchina maturusi, kushanda nzira kubudiswa kwapera, zvokushandisa kwazvo kudiwa, kurimwa kushanda yakaderera, ari machine zvakarurama pamusoro workpiece zvikamu pashure rechipiri clamping iri zvakaoma iko.
Graph rimwe: Kutaurirana, mhuri midziyo yemagetsi, zvemagetsi, matoyi indasitiri zvinowanzoitika zvikamu (32 mm dhayamita muna 20 kusvika Ф Ф)
SX325 akatendeuka, azvikuya, CNC kuenda zvose vane High Rigidity pamwe chete nguva clamping anogona kuzadzisa dzakakwirira kuomarara motokari cylindrical workpiece, endface, shinda, kutema paburi, akagura uye zvido zvevanhu azvikuya, kuchera, tapping uye kuguma chiso uye akagura pashure kumashure kuguma kuchera, tapping, hakunakidzi uye nezvimwe kubudiswa ematongerwo chinzvimbo.
3. Processing simba zvakarurama mutete mugodhi zvikamu:
muonde. 2 munhu mukuru nemazvo uye mutete nomubato mu hydraulic, motokari zvikamu, zvokurapa, avhiyesheni, Aerospace uye Manyiminya maindasitiri.
Figure 2: hydraulic, motokari zvikamu, zvokurapa, avhiyesheni, Aerospace, Manyiminya indasitiri kuti mifananidzo zvikamu (32 mm dhayamita muna 20 kusvika Ф Ф)
Zvakaoma chaizvo kuti dzinoona mutete mugodhi zvikamu pamwe refu / dhayamita reshiyo pamusoro 6, uye zvakarurama uye kunyatsoshanda akaoma iko. New nk CNC slitting otomatiki lathes (CNC vanofamba zvose) nokuti rakasiyana kubudiswa michina yakadai mukuru-nokukurumidza synchronous richitungamirira gwenzi, workpiece vakatema chishandiso zvikamu nguva dzose anotsigirwa richitungamirira ruoko, saka kuti inogona nyore kupatsanurwa mu dhayamita kubva 5 ~ 32 neMM, urefu mukati 280 mm Ultra tetepa mugodhi zvikamu.
2) nokukurumidza / nzvimbo loop inofambiswa adopts zvinhu zvitsva zvakadai pakuvara yakakwirira chisarudzo chendarira kana rinobva, ine yepamusoro kudzora zvakarurama pamusoro muhombe uye dzinovaka.
3) kune chokurukisa miviri mamiriro, zvakakwana kutevedzana kubudiswa rapera pane imwe nguva, achidzikisa kushanda zvakanaka uye zvakarurama pamusoro workpiece nokuda clamping chesekondari, uye Kusimudzira machine kunyatsoshanda.
Vanopfuura 4) multi-akabatana kuzvidzora uye multi-akabatana linkage michina kusimudzira mano muchina chokushandisa kugadzira kuoma nhengo uye machine kunyatsoshanda, muchina chokushandisa kudzora mugodhi nhamba akabatana nomwe, uwandu yemagetsi uye yemagetsi pamwe anopfuura 20 .
5) akapfuma kushandisa michina configuration, kuona chinangwa hwomunhu zvikuru muchina kuvhiyiwa zvakanaka, kuwedzera kune zvetsika bhaa conveyor, kubviswa Chip mudziyo kwayo, akadai refu / pfupi workpiece zvinhu workpiece mugamuchiri, otomatiki mudziyo pamusoro banga, akangwara zvitupa, workpiece otomatiki Popup rokuongorora uye kuedzwa gadziriro chishandiso breakage zvave kubudirira chigadzirwa chikumbiro, akaita aziva zvinomutsa padanho muchina mudziyo kushandisa michina pamwero uye vachiongorora namano.
2.how pamusoro Pre okutengesa rutsigiro?
Pre okutengesa rutsigiro
1, mahara kupa hwokugadzira negadziriso vatengi. Kupa vatengi yakanaka kubudiswa plan, kusanganisira muchina chokushandisa kusarudzwa uye configuration, rikurumidze kubudiswa michina, chishandiso selection, achicheka parameters, zvikamu vanoshanda maawa, Chuck kusarudzwa uye mamwe mabasa.
2, wose nedanho Tracking, kupindura matambudziko nevatyairi vatengi pakushandisa zvokushandisa, ichipa azere siyana unyanzvi rubatsiro vatengi.
3, mahara kuti mutengi dzaishandisa kuti kurovedza. Kurovedzwa mukati zvinosanganisira muchina chokushandisa oparesheni, zvirongwa, kuvariritira uye zvichingodaro, kuitira kuti ave nechokwadi kushandisa unyanzvi muchina Ezvemutauro.
4, zvinopa vakasununguka muchina chokugadza pakutuma nokuda mutengi, maererano itsva Ankai Corporation mainjiniya ari kutakurwa vatengi akasarudzwa nzvimbo, maererano itsva chigadzirwa kugamuchirwa nokurondedzerwa kuti kuisa Ankai mukova vatengi kugovera pamusoro-panzvimbo chokugadza vachindiedza Machine mashandiro, kuitira kuti vatengi kutenga zvigadzirwa inogona kushandiswa zvakananga, uye kwakakwana muchina rokuongorora chisimbiso basa.
3.how pashure-sale basa?
> Ipai lathe womuenzaniso kusarudza kuti mutengi uye sumo pamusoro zvinhu uye zvakanakira ose muenzaniso. Vanokurudzira womuenzaniso kwazvo chakakodzera kuti mutengi mumwe mutengo-vakarongeka zvikuru hurongwa.
> Ichapa kupfuura nounyanzvi Michina pachisara zvinetso icho vatengi akasangana pakuburitswa, regai vatengi kunetseka-free.When zvakakodzera Tichafara kubatsira vatengi kupedzisa ivhu kana zvakafanira.
Isu achapa akasununguka yokugadza, kurovedza basa pashure kutenga kuti vatengi kuitira kutarisira muchina uye kupfeka kugadzirwa nokukurumidza.
mainjiniya dzedu pamberi paunongosvika boka rako kuti chokugadza debugging mabasa, ndapota Gadzirira zvinotevera kugadzirira, saka kuti mainjiniya edu anogona zvakanaka pasina chinovhiringidza kupinda basa pashure asvika.
1. Gadzirira-danho matatu 380V simba nerubatsiro uye pasi waya, uye kuvatungamirira kuti chinzvimbo parutivi muchina chokushandisa kuti akatasva kubudikidza 2.5mm2 waya, saka kuti mainjiniya edu anogona batanidza navo muchina mudziyo pashure asvika, kupa simba muchina chokushandisa.
2. Gadzirira 0.5mpa mumhepo kumanikidzwa zvakakodzera kuti dzose mudzimu muchina chokushandisa, batanidza kuti chinzvimbo parutivi muchina mudziyo kuburikidza φ8 mhepo nenyere.
3. Gadzira kutema mafuta (akadai Ross wakachena nokuveza mafuta A12) zvakakwanira machine gadziriro zvakarurama otomatiki lathe.
4. Gadzira muchina mudziyo lubricating mafuta (akadai Ross A32).